म्यानमारमा सैनिक कु विरुद्ध प्रदर्शनका क्रममा सैनिकले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ८० जनाको मृत्यु – bampijhyala.com
Home > अन्तराष्ट्रीय > म्यानमारमा सैनिक कु विरुद्ध प्रदर्शनका क्रममा सैनिकले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ८० जनाको मृत्यु
२९ चैत्र २०७७, आईतवार ०८:३३ bampijhyala
२९ चैत्र, बाँपीझ्याला। म्यानमारमा सैनिक कु विरुद्धमा जारी प्रदर्शनका क्रममा थप ८० जनाको मृत्यु भएको छ । म्यानमारको बागो शहरमा भएको प्रदर्शनमा सो हताहती भएको हो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सैनिकहरुले ठुला हतियारको प्रयोग गरेका थिए । सैनिक सत्ता कायम राख्नका लागि सेनाले बल प्रयोग गरिरहेको छ ।
८० जनाको मृत्यु भएको समाचार बाहिर आएपनि वास्तविक मृतकको संख्या लुकाइएको आंशका गरिएको समाचार छ । प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म ६ सय भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गइरहेको अन्तराष्ट्रिय समुदायले समेत चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आन्दोलनको भत्सर्ना गरिरहेका छन् ।
म्यानमारमा सैनिक कु भएयता निरन्तर प्रदर्शन जारी छ । म्यानमारका जनताहरुले प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीको रिहाइ लगायतका माग राखेर निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल २९ चैत्र २०७७, आईतवार ०८:३३
सम्झनामा जेठ ३ २९ चैत्र २०७७, आईतवार ०८:३३
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? २९ चैत्र २०७७, आईतवार ०८:३३
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव २९ चैत्र २०७७, आईतवार ०८:३३
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक २९ चैत्र २०७७, आईतवार ०८:३३